We She Me: Beef Noodle
ဒီလောက် အစားအသောက် ပေါတဲ့ စင်္ကာပူမှာ နေတုန်းက မြန်မာပြည်က အစားအစာတွေကို သတိရပြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်စားတယ်။ စင်္ကာပူက ထွက်လာပြန်တော့လည်း စင်္ကာပူက အစားအသောက်တွေကို သတိရပြီး လုပ်စားပြန်ရော။ အဲဒီမှာ သူမ ကြိုက်တဲ့ အစာ တစ်ခုက Beef Noodle။ ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တော့ ကြိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းကတော့ အမဲသားလည်း မစားဘူး။ အမဲအူပြုတ်ဆို အနံ့တောင် မခံနိုင်လို့ ဆိုင်က လမ်းဒီဘက်ခြမ်းမှာဆို ဟိုဘက်လမ်း ကူးပြီး လျှောက်တယ်။ ကြိုက်တဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ မွှေးတယ်ပေါ့။ ဒူးရင်းသီးလိုလေ။ တခြားနိုင်ငံတွေ ရောက်တော့မှ အမဲသား စားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ဒီက နွားတွေက ဆန်စပါးစိုက်ပေးတဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေ မဟုတ်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ စားလို့လည်း ပိုနူးညံ့ပြီး အမဲသား ရှောင်မယ်ဆိုရင် အစားအစာ အဆန်းအပြားလေးတွေ စားရတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီလို အကြောင်းပြချက်နဲ့ အစားကြူးတယ်။ စင်္ကာပူ ရောက်တုန်းက အမဲအူပြုတ်လိုမျိုးကို ခေါက်ဆွဲ (နန်းကြီးလုံး) နဲ ရောင်းတော့ ပထမတော့ မစားရဲကြဘူး။ နောက်တော့ စမ်းစားကြည့်တော့ အနံ့လည်း မပြင်းတာနဲ့ စားဖြစ်သွားတယ်။ သိပ်တော့ မကြိုက်လှပါဘူး။ အဲဒီဆိုင်မှာ တကယ်ကြိုက်တာက Beef Noodle။ အမဲသားကို အစိမ်းနှပ်ထားတာကို ရေနွေးထဲမှာ ခဏပြုတ်ပြီး နန်းကြီးလုံးနဲ့ ကော်ရည်နဲ့ စားရတာ။ Gravy လို့လည်း ခေါ်တယ် Dry လို့ ပြောလိုက်လည်း ရတယ်။ သူတို့ဆီမှာ Gravy စားမလား Soup စားမလား ရတယ်။ Soup ဆိုရင်တော့ အမဲပြုတ်ရည်နဲ့ ခပ်ကျဲကျဲ ခပ်သွက်သွက်ပေ့ါ။
အခုလည်း လုပ်စားမယ်ဆိုပြီး စမ်းလုပ်ကြည့်တယ်။ သူတို့ လုပ်တဲ့ အတိုင်း ဟုတ်ချင်မှတော့ ဟုတ်မယ်။ အမဲသားတွေ ကီလိုဝက်လောက် ၀ယ်ထားပြီး ရေခဲသေတ္တာ (Freezer) ထဲမှာ ခဲထားတာကို ထုတ်ပြီး ရေခဲမပျော်ခင် မာမာလေး ဖြစ်နေတုန်း လက်သန်းလောက် အရှည်၊ တက်နိုင်သလောက် ခပ်ပါပါး လှီးတယ်။ ရေခဲမရိုက်ထားတာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပါ။ ရေခဲရိုက်ထားတော့လည်း ပါးပါးလှီးလို့ ပိုလွယ်တာပေါ့။ ညကတည်းက လှီးထားပြီး ဆားနယ်၊ ရှာလကာရည် (Vinegar) အမည်းရောင်နဲ့ နယ်၊ သံပုရာသီး နည်းနည်း ညှစ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာ (Refrigerator)ထဲ ပြန်ထည့်ထားလိုက်တယ်။ မနက်ကျတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ လှီးရတယ်။ ကြံမဆိုင်ကို ၀ယ်လာတဲ့ အတိုင်းကို ရေ နှစ်ထပ်၊ သုံးထပ်လောက် ဆေးပြီး သေးသေးလေးတွေ ရအောင်လှီးတယ်။ တကယ်တမ်း စားတဲ့ အခါကျတော့ ကြံမဆိုင်ကပဲ အအီပြေစေတာလေ။ ပဲပင်ပေါက်ကို ရေနွေးဖျောထားတယ်။ တရုတ်နံနံ ကို နုတ်နုတ်စင်းထားတယ်။ ရှောက်ရွက်ရရင် ရှောက်ရွက်ကို ပါးပါး လှီးတယ်။ သူတို့ ဆီမှာ ၀ယ်စားတုန်းကတော့ ရှောက်ရွက် မပါပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထည့်စားတာ။ နောက်ပြီး ဆိုင်မှာ စားရင် ကောင်းတာက ငရုတ်ချဉ်။ သူတို့ဟာက ငရုတ်သီးကို ထောင်းထားတာကို ရေကျဲကျဲနဲ့ ဆိုတော့ ငရုတ်ဆီလိုလည်း မဟုတ်ဘဲ စားလို့ကောင်းတယ်။ အသားဖတ်လေးတွေကို ငရုတ်ချဉ်နဲ့ တို့စားလို့ အင်မတန်ကောင်း။
စားခါနီးကျမှ ကော်ရည်ကို ကျိုတယ်။ ၆ယောက်စာလောက်ဆို ကော်မှုန့် (Corn Starch) ကို လဘက်ရည်ဇွန်း ၁၀ ဇွန်း မောက်မောက်ကို ရေအေးနည်းနည်းနဲ့ ဖျော်ပြီး ကျိုတယ်။ ပူလာမှ ရေနွေးထပ်ထည့်ပြီး တစ်အိုးစာ ကျိုတယ်။ မွှေနေတုန်း အရောင်ရအောင် ပဲငံပြာရည် အပြစ်ရည်ထည့်၊ ပိုမွှေးအောင် အကျဲလည်းထည့်၊ ဆားခပ်၊ ကြက်သားမှုန့် နည်းနည်းပါ ခပ်လိုက်တယ် (အချိုမှုန့်အစား)။ မွှေရင်း မွှေရင်းနဲ့ ကော်ရည်တွေက ပြစ်စေးလာတော့ မီးလျှော့ပြီး တစ်ချက် တစ်ချက်ပဲ မွှေတော့တယ်။ ပြီးတော့ နောက်အိုးတစ်လုံးနဲ့ ရေနွေးကျိုထားပြီး လေညှင်းပွင့် ၃-၄ ပွင့်လောက် ပစ်ထည့်ထားတယ်။ ဒီအိုးက အမဲသား ပြုတ်ဖို့။ နောက်ထပ် အိုးတစ်လုံးနဲ့လည်း ရေနွေးကျိုထားပြန်တယ်။ ဒီဟာက မုန့်ဖတ်ကို ရေနွေးဖျောဖို့။
စားခါနီးကျမှ မုန့်ဖတ်တွေကို ရေနွေးဖျောနေချိန်မှာ အမဲသား တစ်ခါစားစာကို သူ့အိုးထဲ ထည့်ပြုတ်လိုက်တယ်။ မုန့်ဖတ်တွေ အတော်အတန် နူးညံ့သွားပြီး ဆိုမှ စားမယ့် ပန်းကန်ထဲထည့်၊ အမဲသားကလည်း တစ်မိနစ်လောက်ပဲ ပွက်ပွက် ဆူနေတဲ့ အိုးထဲမှာ ပြုတ်ပြီးထည့်၊ ကော်ရည် ယောက်ချို တစ်ဇွန်းလောက် ထည့်လိုက်ပြီး ပွဲပြင်ပေးလိုက်တယ်။ စားမယ့်သူက အခပ်တွေ၊ အရွက်တွေ သူဘာသူ ကြိုက်သလောက် ထည့်စားပါစေ။ ငရုတ်ကောင်းလေးပါ ခပ်လည်း ခပ်ပါစေ။ ငရုတ်ဆီနည်းနည်း ထည့်စားလည်း ပိုကောင်းတယ်။ လာစားတဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့ မြီးရှည်နဲ့ တူတယ် ဆိုမှပဲ ကျွန်တော်တို့ လည်း ဟုတ်သားပဲ တွေးမိတယ်။ မြီးရှည်ကတော့ ၀က်သားနဲ့၊ ပဲငပိနဲ့ လုပ်ထားတာပေါ့။ ကော်ရည်ကလည်း ပြစ်ပြစ်တုံးတုံးပါ။ ဒီလိုနဲ့ စားလိုက်ကြတာ အီသွားတော့ လှည့်တောင် မကြည့်ချင်တော့ပေမယ့် မုန့်ဖတ်တွေနဲ့ အမဲသား နည်းနည်း ကျန်နေသေးပါတယ်။ အမဲသား ထည့်ပြုတ်တဲ့ အိုးကလည်း တော်တော်ကို အဆီကျနေပါပြီ။ အဲဒါနဲ့ ညနေစာကို အဲဒီ ပြုတ်ရည်ထဲ ကျန်တဲ့ အမဲသားတွေထည့် မုန့်ဖတ်တွေထည်ပြီး Soup လုပ်သောက် လိုက်တယ်။ ရှောက်ရွက်တွေ ဘာတွေ ခပ်လိုက်တော့ တော်တော့်ကို မွှေးသွားပြီး သောက်လို့ ကောင်းသွားတော့ အပြတ် ရှင်းပစ်လိုက်တော့တယ်။
ဒီလို Beef Noodle က စင်္ကာပူမှာ နေရာတိုင်းလိုလို မှာ ရနိုင်ပြီး နောက်တစ်မျိုး စားခဲ့ရသေးတယ်။ သူကတော့ ဘိုအရသာ။ မုန့်ဖတ်က Spaghetti မုန့်ဖတ်ကို Beef Stew နဲ့စားရတာ။ Stew ကတော့ ဘိုစတိုင် ချက်ထားတာ။ ရှမ်းမုန်ညင်းချဉ်လို မျိုး (အဲဒီလောက်တော့ မပြင်းဘူး) လည်းထည့်ပေးတယ်။ နောက်တစ်မျိုး Food Republic မှာ စားခဲ့တဲ့ တရုတ်ပြည် နယ်တစ်နယ်က (ယူနန်လား မသိ) Beef Noodle။ Beef Stew လိုမျိုးပဲ။ အဲဒီလောက် မပြစ်ဘဲ အရည်နည်းနည်း ကျဲကျဲ နဲ့စားရတယ်။ သူမှာ ထူးခြားတာကတော့ မုန့်ဖတ်ပဲ။ မုန့်ဖတ်က ဂျုံလုံးကြီးကို ဓားနဲ့လှီးလှီးပြီး ရေနွေးထဲကို ထည့်လိုက်တော့ ကျက်သွားတာ။ အဲဒါတွေနဲ့ စာရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ချက်စားတဲ့ Beef Noodle က အရသာ မပြင်းဘဲ လုပ်ရလွယ်တဲ့ Noodle တစ်မျိုးပါပဲ။
Anonymous - 11/8/07, 5:16 AM
Looks like kaw-yay. I will try cooking soon but plans to replace with pork. If possible, u2don't eat beef coz there are other meat/sea food those we can try.Even though ppl not used cows for agriculture, we drink milk/yogurt & we feed our kids with milk powder produced from them. And also what I heard is if the animal is big, the butcher has to put more effort to get it died. So more guilty. Just write about my opinion. Sorry if not agree :)
Andy Myint - 11/8/07, 9:25 AM
That's thoughts worth thinking... and thankful for that